Ny fametrahana loko mety amin'ny akanjo
Ny akanjo - ity ilay "wrapper" izay ahafantarana antsika amin'ny fomba fijery voalohany, izany no fomba fisehontsika ary manantitrantitra ireo nuetes mamirapiratra ny maha-izy anareo, ny fironanareo ary indraindray ny fanirianareo. Ny akanjo lava dia miteny betsaka, ny tena zava-dehibe dia satria tsy mitomany noho ny tsirony ratsy amin'ny lafiny rehetra izy.
Ho hitanao fa manintona sy tsy hay hadinoina any am-piasana, amin'ny fialantsasatra, amin'ny toeram-pisakafoanana, amin'ny hetsika gala, na miaraka amin'ny namana fotsiny, dia mila mahafantatra ny fitsipika fototra amin'ny fifandimbiasana ny lokony amin'ny akanjo izay mifanentana amin'ny fomba rehetra ary mahaliana foana:
Eritrereto ny toetranao ivelany (ny habetsaky ny filentehan'ny masoandro, ny aloky ny volo sy ny maso);
ny "fitsipiky ny telo" malaza, izay milaza fa ny loko misy loko mihoatra ny telo dia tsy azo ekena, tsy mbola nofoanana amin'ny fotoana mitovy amin'ny akanjo;
Ny lokony isan-karazany amin'ny loko iray dia azo ekena amin'ny garderobe;
Ny loko amin'ny tsiranoka isan-karazany dia tsara kokoa tsy tokony hampiarahana (ohatra, vovoka sy asidra);
ampiasao ny loko misy ny lokony mba hanatsorana ny asa miaraka amin'ny fisafidianana ny "satelita" amin'ny loko fototra amin'ny akanjo.
Pikantsary misy loko miavaka amin'ny akanjo
Ireo mpanamboatra lamaody eran-tany dia tsy mitsahatra mampihetsi-po sy manafintohina antsika amin'ny modelim-pifidianana vaovao, ny safidy momba ny endriny, ny palettes mega-lama sy ny firafitry ny fitaovana, saingy tsy maintsy mampiasa ny lokon'ny lokony izy ireo mba hahazoana ireo fitadiavana, ny endrika vaovao sy ny loko vaovao amin'ny akanjo, fitaovana samihafa sy kiraro. Ireto misy ohatra sasantsasany amin'ny loko "loko" amin'ny lamaody:
Monochrome . Raha misy loko vitsivitsy mahaliana sy tsy manintona ny loko iray ihany no mamolavola ny palette amin'ny akanjo, dia tsy hanimba ny sary mihitsy, indrindra raha natao ny lantony amin'ny alokaloka. Ao amin'ny loko marevaka, ny toerana misy ny iray hafa dia mifanaraka tsara, toy ny alokaloka. Ohatra, ny maingoka malefaka maitso dia hanohana tsara ny loko chiffon amin'ny loko salady maivana, ary ny akanjo marevaka malefaka miaraka amin'ny rantsantanana 3/4 dia ho fanohanana tsara ho an'ireo mpitarika ireo.
Ny fàfana lamaody lamaody dia manampy . Ny loko eo amin'ny sehatra dia mifanohitra amin'ny tsirairay, amin'ny ankapobeny dia mamorona sary mahaliana sy mampihetsi-po, mahazo sary manankarena ianao. Ny zava-dehibe indrindra dia tsy tokony handratra ny endriky ny akora sy ny fitaovana, mba tsy "handrotsa" ny tongolonao. Ny ohatra iray dia akanjo marevika miaraka amin'ny felam-boninkazo marevaka matevina, avy eo dia hifanaraka aminao ny firaisana.
The Triad . Io fombafomba lamaody io dia ho azo raha mieritreritra ny telozoron'ny fifandimbiasana iray izay ny tendany dia mifandray amin'ny loko iray manokana ao anatin'io sehatra io. Ny trio lehibe tahaka izany dia hanampy anao hitazana ny fahagagana, fa tsy hentitra, ary ny sary dia ho satry, fa tsy eklektika. Alao sary an-tsaina, ohatra, ny lakolosy kely amin'ny loko, ny hazavana maitso matevina ary ny fehiloha lava lila. Ny fifandraisana amin'io tandemika io dia azo atao ho mafy orina amin'ny manikinera na lipstick eo ambanin'ny lokon'ny kerobima.
Aza matahotra ny fanandramana, manandrama sary samihafa, mampiseho ny hevitra saro-bidy sy tsy dia mahazatra ho an'ny hafa, ary dia ho hitanao amin'ny farany ny firaiketam-poko feno firaiketam-po amin'ny akanjo, kiraro, ary eny anivon'ny tontolo manodidina.
Ny endrika "apple"
Loko pastel - inona io?
Boots ho an'ny akanjo hariva
Toeran'ny tarehin'ny tifitra
Famintinana loko amin'ny akanjo - manga
Officially: Prince Harry sy Megan Markle dia nanambady!
Mamafaza ny lavarangana amin'ny tananao
Fanamorana ny valan'ny valan-javaboary - fitsaboana
Ahoana no anaovan'ny tantely tantely tantely?
Sotro kafe amin'ny ririnina
Ny aretin-kozatra dia maratra - soritr'aretina
Courtney Kardashian nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Iza amin'ireo fitoeran-dabozia ireo no ahafahan'ny rindrina?
Fitaovana ho famaranana ny rindrina ao an-trano - hevitra mahaliana ho an'ny trano fonenana maoderina
Separate diet for loss of weight